Outlook Express ပြုပြင်ရေးကိရိယာ Outlook Express Software ကို Fix ။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Outlook Express Repair?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost တစ် ဦး ၏အရေးကြီးသောစံ Outlook Express ဒေတာပြန်လည်နာလန်ထူထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ DataNumen Outlook Express Repair အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်စျေးကွက်ရှိအခြားပြိုင်ဖက်များထက်များစွာပိုကောင်းသည်။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen Outlook Express Repair ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
ကျွန်ုပ်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော dbx ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သောသင်၏ DOER အတွက်သင့်အားကျွန်ုပ်ဂုဏ်ပြုပါသည်။
အလွတ်တန်းဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် website တည်ဆောက်ခြင်း
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ - မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိပ္ပါယ်မရှိသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အလွန့်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များဖြင့်ပြောသည့်အတိုင်းပြုလုပ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်! မင်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုမင်းအရင်ရှာတွေ့ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ - မှန်မှန်ကန်ကန်အဓိပ္ပါယ်မရှိသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အလွန့်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များနှင့်အတူသူပြောသည့်အတိုင်းပြုလုပ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်! အဲဒီမှာရှိဟန်ဆောင်သူများစွာအပေါ်ငါ့ပိုက်ဆံမဖြည့်ခင်ခင်ဗျားရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုရှာတွေ့ချင်ပါတယ်။
DOER နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းသည်ယခုအခါ ၁၀၀% ရှိသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ IE နှင့် OE အမှိုက်မတိုင်မီ flash drive ပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်နှင့်သိမ်းဆည်း !!!
ကျေးဇူးတင်စရာမှာကျွန်ုပ်သည်နို ၀ င်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှကျောထောက်နောက်ခံပေးထားသော dbx ဖိုင်များအားလုံးကိုသိမ်းထားခဲ့ပြီးကျန်အရာအားလုံးမှာဖြစ်သည်
ကျေးဇူးတင်စရာမှာကျွန်ုပ်သည်နို ၀ င်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ dbx ဖိုင်များအားလုံးကိုသိမ်းထားခဲ့ပြီးကျန်တာအားလုံးသည်အီးမေးလ်ဆာဗာတွင်ရှိနေသေးသဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးသောအခါ၊ အီးမေး (၉၅) လုံးကိုကျွန်ုပ်ဆွဲယူခဲ့ပြီးပါပြီ။
အလွယ်တကူတန် ၅၀ နဲ့ကျတယ်။
2GB အထက်ရှိသောကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုသူ .dbx ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန် DOER ကိုကျွန်ုပ်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သောအပတ်က ၄ င်း၏ hard drive မှ ၄ နှစ်အီးမေးလ်ပြန်လည်ရယူရန်ရုန်းကန်နေရသည်။
DOER ၏သရုပ်ပြပုံစံကိုအသုံးပြုခဲ့သည် -
DOER ၏သရုပ်ပြပုံစံကိုအသုံးပြုခဲ့သည် - ၎င်းသည်တရားမျှတမှုနှင့်အပြည့်အဝမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဗားရှင်းအပြည့်အစုံသည်ကျွန်ုပ်၏မေးလ် ၁၀၀% - အလွန်ကောင်းသောဆော့ဗ်ဝဲအပိုင်းအစတစ်ခု - အလွန်စျေးကြီးသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဂရိတ်ထုတ်ကုန် - အမှန်တကယ်အသက်ကယ်ကယ်တင်ရှင်တစ် ဦး!
ငါဝယ်လိုက်တယ် DataNumen Outlook Express Repair ငါ၏အ OE စာရင်းမှတစ်နည်းနည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားသောငါ၏ folder ထဲမှာဖိုင်များကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ကောင်းမွန်။ မင်းရဲ့
ငါဝယ်လိုက်တယ် DataNumen Outlook Express Repair ငါ၏အ OE စာရင်းမှတစ်နည်းနည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားသောငါ၏ folder ထဲမှာဖိုင်များကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ကောင်းမွန်။ သင်၏ထုတ်ကုန်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
က Nathaniel ဒဗလျူပီယပ်
သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲသည်ကျွန်ုပ်အားများစွာကူညီခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ !!!!!!!!!!
Morganite Brasil Ltda ။
သင့်မှာအကောင်းဆုံး product.It သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖိုင်များစွာကိုပြန်လည်ရယူသည်။
အာသာ J ကို Wehlow
Manager ကို Express ကိုစာရင်းကိုင်ဖြေရှင်းချက်
ဆိပ်ကမ်း Macquarie NSW 2444, USA
ယနေ့သင်၏ဥစ္စာကိုငါယူပြီ Advanced Outlook Express Repair - ဂုဏ်ယူပါတယ်၊
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ် shimerring log သို့မဟုတ် Inbox dbx ဖိုင်ပါအကြောင်းအရာများကိုအီးမေးလ်များနှင့်တူညီသောအချိန်ကာလ ၂ ဖိုင်အတွင်းသို့ကြံဆခြင်းကဲ့သို့သေးငယ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၂၀၀၀ အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူပြီးနောက်ပြန်လည်ဆယ်တင်ထားသောအီးမေးလ်များဖြင့်အခြားဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း၊ အီးမေးလ်ရက်စွဲများနှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ဆက်တွဲဖိုင် (၂) ခုရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ အချိန်အီးမေးလ်!
ဒါပေမဲ့၊ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါတွေကသေးငယ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ အားလုံးအထက်က၊ သင်၏ဆော့ဗ်ဝဲလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်ကိုငါဂုဏ်ယူသည်၊ ၎င်းကိုသူငယ်ချင်းများကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိမ့်မည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များဖွံ့ဖြိုး & ဖန်တီးအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးဆန္ဒရှိ!
သင့်ရဲ့တုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် - သင်၏အကူအညီကိုတန်ဖိုးထားတယ်။
တကယ်တော့မနေ့ကငါ AOER နဲ့ l အားလုံးကိုဝယ်ခဲ့တယ်ost အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့ကြသည် !!
AOER သည်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပုံရပြီးကျွန်ုပ်၏ OE ပြproblemsနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။
ငါ l ရှိခဲ့တယ်ost Compact လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရေးကြီးသောအီးမေးလ်များကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်၊ မည်သို့ပြန်လည်ဖွင့်ရမည်ကိုမသိရှိခဲ့ပါ။ သင်၏ထုတ်ကုန်သည်ထုတ်ပေးသောအဖြေကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်
ငါ l ရှိခဲ့တယ်ost Compact လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအရေးကြီးသောအီးမေးလ်များကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်၊ မည်သို့ပြန်လည်ဖွင့်ရမည်ကိုမသိရှိခဲ့ပါ။ သင့်ထုတ်ကုန်သည်ထုတ်ပေးသောအဖြေကို (နောက်ဆုံးတွင်) ဖြေရှင်းလိုက်သည်။
သို့သော်ငါကဲ့သို့သော ludites များကို BAK fliles များအား DBX ဟုအမည်ပြောင်းနိုင်သည်ဟုသင်ရှင်းပြသင့်သည်။ မီတာost ငါလိုချင်သော Improtant ဖိုင်ကို BAK ဟုအမည်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဖိုင်တွဲအမည်ကိုပြောင်းလဲပြီးကျန်ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုအသုံးချနိုင်ကြောင်းသုတေသနပြုလုပ်ရန်တစ်ရက်အချိန်ယူခဲ့သည်။ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးတာနဲ့ဒါဟာအားရစရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်!
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Outlook Express Repair v2.5
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု Outlook Express4mbx ဖိုင်များနှင့် Outlook Express 5/6 dbx ဖိုင်များ။
floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာတွင် dbx ဖိုင်များနှင့် mbx ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
dbx ဖိုင်များနှင့် mbx ဖိုင်အမြောက်အများကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု။
dbx နှင့် mbx ဖိုင်များကို 4GB အထိပြင်ဆင်ရန်အတွက်၎င်းသည် 2GB ပြwithနာနှင့်အတူ dbx ဖိုင်များကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု Outlook Express tempo မှဒေတာrary .dbt ဖိုင်များ။
ဒေသခံကွန်ပျူတာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့် dbx သို့မဟုတ် mbx ဖိုင်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန်ထောက်ပံ့ပါ။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည် dbx ဖိုင်ကို Windows Explorer ၏ဆက်စပ်မီနူးဖြင့်လွယ်ကူစွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။
Command line (DOS prompt) သတ်မှတ်ချက်များကိုပံ့ပိုးပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ program မှ DOER ကိုတောင်းနိုင်သည်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Outlook Express Repair ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် Outlook Express အီးမေးလ်များ
Outlook Express အီးမေးလ်များအားလုံးကို .dbx ဖိုင်များဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဥပမာ Inbox.dbx ဖိုင်တွင် Inbox ထဲတွင်အီးမေးလ်များ၊ Outbox.dbx ဖိုင်တွင် Outbox မှအီးမေးလ်များပါဝင်သည်။
.dbx ဖိုင်သည်အကျင့်ပျက်ပြားပြီးသင်၌ပါသောအီးမေးလ်များကိုသင်မရရှိနိုင်ပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Outlook Express Repair သင်၏အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူရန် ပြန်လည်ရယူထားသောအီးမေးလ်များကို .eml ဖိုင်များအဖြစ်သိမ်းဆည်းပြီး၊ Outlook Express.
အဂတိလိုက်စားသည့် .dbx သို့မဟုတ် .mbx ဖိုင်ကိုရှာပါ သင်ဒါကိုမလုပ်ခဲ့ရင်ပြန်ပြင်ရမယ်
မှတ်စု: အတူအကျင့်ပျက် dbx သို့မဟုတ် mbx ဖိုင်ကိုမပြုပြင်မီ DataNumen Outlook Express Repairကျေးဇူးပြုပြီးပိတ်ပါ Outlook Express နှင့်ဖိုင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံစေခြင်းငှါအခြားမည်သည့် applications များ။
ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည့်အကျင့်ပျက် dbx သို့မဟုတ် mbx ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင် dbx သို့မဟုတ် mbx ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည် ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိပြန်လည်ပြုပြင်ရန် dbx သို့မဟုတ် mbx ဖိုင်ကိုရှာဖွေရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen Outlook Express Repair xxxx သည်အကျင့်ပျက် dbx သို့မဟုတ် mbx ဖိုင်၏အမည်ဖြစ်သောနေရာတွင် xxxx_recovered ရှိပြန်လည်ရယူထားသောစာများအားလုံးကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာ Inbox.dbx ဖိုင်အတွက်မူပုံမှန် output directory သည် Inbox_recovered ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တစ်ခြား directory ကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကိုရွေးချယ်ပါ။
directory directory ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ directory ကို browse နှင့်ရွေးချယ်ဖို့ခလုတ်ကို။
ကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်, DataNumen Outlook Express Repair အလိုလိုtart ပျက်စီးနေသော dbx သို့မဟုတ် mbx ဖိုင်မှ mail များကိုပြန်လည်ရယူခြင်း။ တိုးတက်မှုဘား
ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပါက၊ dbx (သို့) mbx ဖိုင်မှမည်သည့်သတင်းစကားကိုမဆိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရယူပြီးပါက၊ အောက်ပါစာတိုလေးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုသင်သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်သည့်သတင်းစကားကိုဖွင့်နိုင်သည် Outlook Express ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ output directory ထဲတွင် .eml ဖိုင်၏အိုင်ကွန်။ သိုမဟုတ်အီးမေးလ်များစွာကို mail ဖိုင်တွဲတစ်ခုအတွင်းသို့တင်သွင်းပါ Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Express Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Express Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Express Repair ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Express Repair ၂.၀ ကို ၂ ဝဝ ၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Express Repair ၁.၅ ကိုဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် ၂၀၀၆ တွင်ထုတ်ပြန်သည်